Politika Fiarovana fiainan'olona. Fepetra sy fepetra |
Vaovao farany: 10 septambra 2018
At stopsafeschools.com, izahay dia manolo-tena amin'ny fiarovana ny tsiambaratelo amin'ny maha-mpanjifa anao sy mpitsidika an-tserasera ny tranokalantsika. Ampiasainay aminao ny fampahalalana nangoninay momba anao mba hahafahanao manatsara kokoa ny serivisy omenay anao. Manaja ny momba ny tsiambaratelo sy ny tsiambaratelo ny mombamomba anao nomena anao izahay ary manaraka ny Fitsipiky ny Fitsipika Aostraliana. Azafady vakio tsara ny fitsipika momba ny tsiambaratelo eto ambany.
FAHAROA AZONAO VOLANA IZAO ANAO
Mandritra ny fitsidihanao ny tranokalanay na ny fampiasana ny vokatra sy serivisinao, azontsika atao ny mahazo ireto fampahalalana manaraka ireto momba anao: anarana, anarana anarana, anaran'ny orinasa, adiresy mailaka, laharana an-tariby, antsipirihany karatra, adiresy faktiora, toerana misy ny toeranao, adiresy IP, ny valin'ny fanadihadiana, ny fangatahana fanohanana, ny fanehoan-kevitra amin'ny bilaogy ary ny fitantanana media sosialy (miaraka amin'ny 'Data manokana').
Ny serivisy ataonay dia tsy ampitaina amin'ny olona ambanin'ny 18 ary tsy manangona angon-drakitra manokana izahay avy amin'ny olona ambanin'ny 18. Raha fantatsika fa ny zaza iray latsaky ny 18 dia nanome Data anay manokana, dia hofafantsika haingana haingana izany. Raha toa ianao ka ray aman-dreny na mpiambina zanaka ary mino ianao fa nomen'izy ireo ny angon-drakitra manokana izahay nefa tsy nahazoana alàlana aminao, dia iangaviana izahay hifandray aminay.
Azonao atao ny mandinika, manitsy, manavao ary manongotra ny Data-kaontinao amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny kaontinao ary hanao ny fanovana ny tenanao na mifandray mivantana aminay hanao izany.
INONA NO FAMPISEHOANAO NY FIDERANAO
Fampahalalana manokana azo jerena: Mampiasa ny vaovao angoninay izahay mba hanaterana ny serivisy ho anao, ao anatin'izany: ny fifandraisana aminao, manome fanampiana ara-teknika, fampahafantarana anao fanavaozana sy tolotra, fizarana votoaty mahasoa, fandrefesana ny fahafaham-po ny mpanjifa, fanaovana fitiliana olana ary manome anao manokana traikefa amin'ny tranokala.
Ny serivisy amin'ny marketing dia alefa aminao fotsiny raha toa ka nangataka na nandoa azy ireo ianao. Azonao atao ny misafidy ny serivisy ara-barotra amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny tsy fanoratana na fandefasana mailaka anay ary ho tanterahana avy hatrany ny fangatahanao.
Fampahalalana tsy azo fantarina manokana: Ampiasainay koa ireo fampahalalana izay angoninay amin'ny endrika atambatra sy tsy fantatra anarana hanatsarana ny serivisy ataontsika, ao anatin'izany: ny fitantanana ny tranonkalantsika, ny famoahana ny tatitra sy ny analytics, ny dokambarotra ny vokatrao sy ny serivisintsika, ny mombamomba ny fangatahan'ny mpampiasa sy ny fanampiana ny filan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny. .
Ny fampahalalana rehetra nofidinao hampiasa amin'ny daholobe, toy ny fanehoan-kevitry ny bilaogy sy ny fijoroana vavolombelona ao amin'ny tranokalanay dia azo alaina ho hitan'ny hafa. Raha esorinao io fampahalalana io avy eo, dia azo jerena ao anaty pejy cache sy voatahiry ao amin'ny tranokala hafa ny kopy na raha nandika na nitahiry ny vaovao ireo ny hafa.
TOROHORO SY NY FANDROSOAN’NY FIDERANAO
Izahay dia hampiasa ny fomba rehetra azo iarovana mba hiarovana ny tsiambaratelo ny Data anao manokana mandritra ny fanananay na fehezinay. Ny fampahalalana rehetra azonay aminao dia voatahiry sy arovana ao amin'ny mpizara antoka azo antoka amin'ny fampiasana na fidirana tsy nahazoana lalana. Ny fampahalalana momba ny carte de crédit dia nakambana alohan'ny famindrana ary tsy notahirizinay amin'ny mpizara.
Mba hahafahanay mandefa ny serivisinay, azontsika atao ny mamindra fampahalalana izay angoninay ny momba anao, anisan'izany ny angon-drakitra manokana, miampita sisin-tany ho an'ny fitahirizana sy fanodinana any amin'ireo firenena hafa ankoatr'i Australia. Raha nafindra sy nohodinina tany ivelan'i Aostralia ny Data-kaontinao manokana, dia halefa any amin'ireo firenena manana fiarovana fiarovana miafina ihany izy ireo.
Notazoninay ny fampahalalana anao manokana raha mbola ilaina ny manome serivisy aminao ary raha tsy izany dia ilaina amin'ny fanarahana ny adidy ara-dalàna, famahana ny fifandirana ary ny fampiharana ny fifanarahana nataontsika.
Raha misy ny fanitsakitsahana ny fiarovana anay ary ifandimbiasan'ny Data-kaontinao manokana, dia hampandre anao haingana izahay amin'ny fanarahan-dalàna anao.
NY BOKY SY ny sary
Cookie iray dia rakitra kely napetraka ao amin'ny tranonkalanao izay manangona fampahalalana momba ny fitondran-tenanao amin'ny Internet. Ny fampiasana mofomamy dia mamela ny tranonkala iray hanamboarana ny fanamafisana azy amin'ny zavatra ilainao sy tianao. Tsy mahazo fampahalalana voatahiry ao amin'ny solosainao na ireo angon-drakitra manokana (ohatra ny anarana, adiresy, adiresy mailaka na laharana an-tariby). Ny ankamaroan'ny mpizara tranonkala dia manaiky faisana cookies nefa azonao atao ny misafidy ny handà ny mofomamy amin'ny alàlan'ny fanovana ny laha-browser. Ity kosa anefa dia mety hanakana anao tsy haka tombony amin'ny tranokalanay.
Ny tranokalanay dia mampiasa mofomamy mba hamakafaka ny fifamoivoizana tranonkala, manome ny fizarana media sosialy ary tiana ny fomba fiasa ary hanampy antsika hanome traikefa mpitsidika tsara kokoa. Ankoatr'izay, ny cookies sy ny piksel dia azo ampiasaina hanaterana doka mifandraika amin'ireo mpitsidika tranokala amin'ny alàlan'ny serivisy fahatelo an'ny Google toy ny Google Adwords ary Facebook Adverts. Ireo doka ireo dia mety hiseho amin'ny tranokala na tranokala hafa tsidihinao.
FAMPISEHOANA NY FAHASORORANA INDRINDRA ANAO
Izahay dia tsy ary tsy amidy sy varotra amin'ny angon-drakitra manokana na fampahalalana momba ny mpanjifa.
Ny antsipirian'ny fampahalalana momba anao manokana dia tsy ampahafantarina amin'ny mpamatsy antoko fahatelo ihany rehefa takian'ny lalàna, ho an'ny entana na serivisy izay novidianao, ho an'ny fanodinana ny fandoavam-bola na hiarovana ny zontsika, ny mari-pamantarana ary ny zon'ny lalàna hafa. Raha ny zarainay no mizara ny angon-drakinao manokana amin'ny mpamatsy tolotrasa, dia hanao izany izahay raha toa ka nanaiky ny hanaraka ny fenitra momba ny fiainantsika manokana ity antoko ity ary araky ny lalàna mifandraika amin'izany. Ny fifanarahana ataonay amin'ireo antoko fahatelo dia mandrara azy ireo tsy hampiasa ny angon-drakinao manokana ho an'ny tanjona hafa ankoatr'izay nanaterana azy io.
Famaritana ny fampahalalam-baovao
Isika dia mila manambara tsindraindray ny fampahalalana sasany, izay mety misy ny angon-drakinao manokana, mba hanaraka ny fahazoan-dàlana ara-dalàna, toy ny lalàna, fitsipika, didim-pitsarana, subpoena, alalana, amin'ny fizotran'ny raharaham-pitsarana na amin'ny famaliana. amin'ny fangatahan'ny masoivoho mpampihatra lalàna. Ary azontsika atao koa ny mampiasa ny angon-drakinao manokana hiarovana ny zon'olombelona, ​​ny fananana na ny fiarovana stopsafeschools.com, mpanjifantsika na fety fahatelo.
Raha misy fanovana fanaraha-maso ao amin'ny iray amin'ireo orinasanay (na amin'ny fampivondronana, ny fivarotana, ny famindrana ny fananana na ny hafa) ny fampahalalana momba ny mpanjifa, izay mety hahitana ny angon-drakinao manokana, dia azo afindra amin'ny mpividy iray eo ambany fifanarahana tsiambaratelo. Izahay dia manambara am-pinoana tsara ny tahirin-kevitray manokana ary izay takian'ny toe-javatra rehetra etsy ambony.
LAHATSORATRA ANARANA OFISIALY
Ity tranokala ity dia mety misy rohy mankany amin'ny tranokala hafa. Ireo rohy ireo dia natao ho anao fotsiny. Ny rohy mankany amin'ny tranonkala fahatelo dia tsy fanohanana na fankatoavana ireo tranonkala ireo. Aza adino fa tsy tompon'andraikitra amin'ny fanaovan-tranonkala manokana ho an'ny tranonkala hafa izahay. Mamporisika ny mpampiasa anay ho tonga saina izahay, rehefa mandao ny tranokalanay izahay, hamaky ireo fanambarana momba ny tsiambaratelo isaky ny tranonkala tsirairay izay manangona fampahalalana manokana. Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia mihatra fotsiny amin'ireo fampahalalana nangonin'ity tranokala ity.
FIVAROTANA INDRINDRA INDRINDRA
Raha mikasa ny hiantohana ny politikantsika manokana isika dia mijanona amin'izao fotoana izao, miova ny politika. Azontsika atao ny manova io pôlitika io amin'ny fotoana rehetra, ao amin'ny fahaizantsika irery ary ny fanovana rehetra dia hiasa avy hatrany amin'ny fandefasantsika ny fanovana amin'ity tranokala ity. Avereno miverina miverimberina mba hamerina hijery ny politikam-piainantsika.
Raha manana fanontaniana na ahiahy ianao amin'ny fotoana rehetra momba ny politikantsika manokana na ny fampiasana ny angon-drakinao manokana dia azafady mba hifandraisa aminay https://www.stopsafeschools.com/contact ary hamaly ao anatin'ny ora 48 isika.
VAKIO NY FAMPIASANA ARY IZANY TOKONY HANAIKY AZY DIA TOKONAO AZY IZAO ATAO NY FAMPISEHOANA IZAO.
Tongasoa eto amin'ny tranokalanay. Raha manohy mijery sy mampiasa ity tranokala ity ianao dia manaiky ny hanaraka sy voafatotry ireto fepetra sy fepetra manaraka ireto, miaraka amin'ny politika momba ny fiainana manokana sy ny fandavana ny tranokala, stopsafeschools.comfifandraisanao aminao amin'ny fifandraisan'ity tranokala ity.
Amin'ny fampiasana an'ity tranokala ity, ampahafantarinao ny fanekenanao ireo fepetra ireo sy ny fepetra fampiasana. Mikasika ireo teny sy fepetra ireo dia ny "Us", "Our" ary "We" no manondro stopsafeschools.com ary ny "You" sy "Your" dia manondro anao, ilay mpanjifa, mpitsidika, mpampiasa ny tranokalan'ny mpampiasa na olona mampiasa ny tranonkalantsika.
Izahay dia manana ny zo hanova, hanova, hanampy na hanaisotra ny ampahany amin'ireo teny ireo amin'ny fotoana rehetra. Azafady diniho matetika ireo fehezanteny ireo alohan'ny hampiasana ny tranokalanay mba hahazoana antoka fa mahatsapa misy fiovana ianao. Hiezaka izahay hanasongadina izay fiovana lehibe na lehibe ao aminao raha azo atao. Raha misafidy ny hampiasa ny tranokalanay ianao dia handray an-tsaina izany fampiasana izany ho porofon'ny fahatsiarovanao sy fanekenao fa ireo teny ireo dia mifehy ny stopsafeschools.comNy zon'ny tsirairay sy ny adidiny amin'ny tsirairay avy.
Tena fepetra ilaina amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokalanay izay ekenao sy ekenao izany stopsafeschools.com tsy tompon'andraikitra ara-dalàna amin'ny fatiantoka na fahasimbana mety tratranao mifandraika amin'ny fampiasana ny tranokala, na avy amin'ny hadisoana na tsy fahazoana antontan-taratasinay na fampahalalana, izay entana na serivisy azontsika atolotra na avy amin'ny fampiasana ny tranokala hafa. Tafiditra amin'izany ny fampiasana na ny fahatokisanao amin'ny votoatin'ny antoko fahatelo, rohy, fanehoan-kevitra na dokambarotra. Ny fampiasanao, na ny fiankinan-dohanao, ny fampahalalana na fitaovana rehetra ao amin'ity tranokala ity dia atahoranao tanteraka, izay tsy tokony hanananay.
Anjaranao manokana ny miantoka fa misy vokatra, serivisy na fampahalalana azo amin'ny alàlan'ity tranokala ity dia mahafeno ny fepetra takinao manokana sy manokana. Ekenao fa ny fampahalalana sy ny fitaovana toy izany dia mety misy tsy fahatomombanana na hadisoana ary manilika am-pitiavana ny tsy fahazoana diso na fahadisoana toy izany hatramin'ny faran'ny fankatoavana tanteraka.
Fifaninanana sy fanatanterahana
Ho an'ny tanjon'ny fandaharam-potoana 2 ny lalàna momba ny mpanjifa Aostraliana, indrindra ny fizarana 51 ka 53, 64 ary 64A ao amin'ny ampahany 3-2, fizarana 1, Subdivision A ao amin'ny Lalàna fifaninanana sy mpanjifa 2010 (Cth), stopsafeschools.comNy adidy amin'ny fandikana ny fe-potoana io fifanarahana io dia voafetra amin'ny: ny famatsiana ny entana na serivisy aminao indray; ny fanoloana ny entana; na ny fandoavana ny vidin'ny fananana ny entana na serivisy natolotra anao indray.
Tsy maintsy mihoatra ny 18 taona ianao hampiasa ity tranokala ity sy hividy entana na serivisy.
FITORIANA NY TSARA
Ny entana ara-batana dia mety ateraky ny Australia Post sy / na orinasa malaza any an-tsaha. Ny fandefasana dia voatsangana haingana rehefa nahazo ny fandoavana manontolo. Ny fandefasana dia mety hitranga eo anelanelan'ny 2 sy 14 andro, arakaraka ny safidy amin'ny fandefasana. Ny baiko simba na very dia tokony raisina miaraka amin'ny Australia Post na ny orinasa courier mivantana ary tsy tompon'antoka amin'ny entana simba amin'ny fitaterana na tsy voaravina isika. Ny fanoloana ireo fitaovana simba na very dia atao amin'ny alalan'ny stopsafeschools.com.
Ampitaina avy hatrany ny entana nomerika. Aza hadino fa misy ny loza miteraka eo amin'ny fisintonana ireo rindrambaiko sy ireo entana nomerika. Raha manana olana ara-teknika ianao amin'ny fampidinana ireo entinay, azafady mba hifandraisa aminay mba hahafahanay manandrana manampy anao.
MITADIAVITRA ARY AZONY
stopsafeschools.com miverina dia miverina ary miverina ny famerenana araka ny lalàna mifehy ny fiarovana ny Aostraliana.
Raha te hamerina ny baikonao ianao, azafady ampahafantaro anay ao anatiny izany andro nividy niaraka tamin'ny antony mitaky fiverenany. Raha tsy afaka mamaha ny fitarainananao ianao na manampy anao bebe kokoa dia hanao famerenam-bola izahay rehefa vita ara-potoana ny entana novidina. Ny entana tsy misokatra dia haverina feno. Ny famerenana dia ho zahana haingana sy ny fandoavam-bola amin'ny fomba mitovy izay nataonao fandoavam-bola. Ny refund rehetra dia atao amin'ny alalan'ny stopsafeschools.com.
stopsafeschools.com mety hanome tsindraindray ao amin'ny tranokalany, rohy mankany amin'ny tranokala hafa, dokam-barotra ary fampahalalana momba ireo tranokala ireo raha hanamora anao. Tsy voatery hoe manohana, mitarika, na fanekena na fifanarahana stopsafeschools.com ary ny tompon'ireo tranonkala ireo. stopsafeschools.com tsy mandray andraikitra amin'ireo izay atokana hita any amin'ireo tranonkala mifandray.
stopsafeschools.comNy tranokalan'ny tranokala dia mety misy fampahalalana na doka nomen'ny antoko fahatelo amin'izany stopsafeschools.comTsy mandray andraikitra na inona na inona amin'izay fampahalalana na torohevitra omena anao mivantana amin'ny ankolafy. Izahay dia manao "fahazoan-kevitra" fotsiny ary tsy manome torohevitra na mandray andraikitra izahay amin'izany.
Hatramin'ny lalàna tanteraka. stopsafeschools.com Fandavana tanteraka ny antoka rehetra, izay nambara na nampiditra azy ireo, ao anatin'izany, fa tsy voafetra amin'ny fahazoana antoka momba ny varotra sy ny fahasalamana ho an'ny tanjona manokana. stopsafeschools.com tsy manome antoka fa tsy ho diso ny antontan-taratasy, entana na serivisy, na hanitsy ny lesoka, na tsy misy otrikaretina na tranonkala manimba ny tranokalanay na ny mpizara.
Na eo aza isika, amin'ny fotoana rehetra dia manandrana manana fampahalalana marina sy azo antoka sy maharitra indrindra ao amin'ny tranokalanay, dia tsy manome antoka na manao fisolontena momba ny fampiasana na ny vokatry ny fampiasana antontan-taratasy, vokatra, serivisy, izahay. rohy na fampahalalana ao amin'ny tranokalany na amin'ny maha-izy azy, ny mety, ny mahitsy, ny fitokisana, na raha tsy izany.
Adidinao irery fa tsy andraikitra ataonao stopsafeschools.com mba hitondra an'izay rehetra sy ny vidin'ny fanompoana, fanarenana na fanitsiana. Ny lalàna azo ampiharina ao amin'ny faritaninao na ny faritany dia mety tsy mamela ireo fanavakavahana ireo, indrindra indrindra fa ny fanaintainan'ny antokon-kevitra sasany. Ny sasany amin'ireo eo ambony dia tsy mihatra aminao nefa tsy maintsy miantoka ianao fa fantatrao ny mety ho loza mety horaisinao amin'ny alàlan'ny tranokala ity na vokatra na serivisy mety atolotra amin'izany. Anjaranao ny manao izany.
At stopsafeschools.com, izahay dia nanolo-tena hiaro ny fiainanao manokana. Ampiasainay aminao ny fampahalalana nangoninay momba anao mba hahafahanao manatsara kokoa ny serivisy omenay anao. Manaja ny momba ny tsiambaratelo sy ny tsiambaratelo ny mombamomba anao nomena anao izahay ary manaraka ny Fitsipiky ny Fitsipika Aostraliana. Azafady vakio tsara ny politikam-piraisantsika manokana.
Azonao atao ny manova ny antsipirianao amin'ny fotoana rehetra amin'ny torohevitra anao amin'ny fanoratana amin'ny alàlan'ny mailaka. Ny fampahalalana rehetra azontsika amin'ny mpanjifanay dia arovan'ny mpizara azo antoka. stopsafeschools.comNy rindrambaiko mpizara fiarovana azo antoka dia mametaka ny fampahalalana rehetra an'ny mpanjifa alohan'ny handefasana azy aminay. Ankoatr'izay, ny angon-drakitra rehetra angonin'ny mpanjifa dia voaaro amin'ny fampiasana tsy nahazoana alàlana. Ny fampahalalana momba ny carte de crédit dia tsy natolotry anay amin'ny mpizara
Izahay dia tsy ary tsy amidy sy varotra amin'ny mombamomba ny tena manokana na ny mpanjifa. Na izany aza, azontsika atao amin'ny ankapobeny ny hevitray fa tsy misy firesahana momba ny anaranao, ny fampahalalana anao hamoronana statistika marketing, hamantatra ny fangatahan'ny mpampiasa ary hanampy amin'ny famoahana ny filan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny. Ankoatr'izay, azontsika atao ny mampiasa ny fampahalalana izay atolotrao hanatsarana ny tranokalanay sy ny serivisy nefa tsy misy fampiasana hafa.
NY FIJOROANA NY FIKAMBANANA
stopsafeschools.com mety takiana, amin'ny toe-javatra sasany, mba hampahafantarana ny vaovao tsara sy amin'ny toerana misy azy stopsafeschools.comtakiana amin'ny fanaovana izao toe-javatra manaraka izao: amin'ny alàlan'ny lalàna na amin'ny fitsarana rehetra; hanamafisana ny fepetra apetraky ny fifanarahana ataon'ny mpanjifa; na ho fiarovana ny zon-tany, ny fananana na ny fiarovana ny mpanjifantsika na ny antoko fahatelo.
Raha misahana ny fananganana antontan-taratasy mitovitovy, entana na serivisy ianao amin'ny famoahana azy ireo ny sarany ho an'ny mpampiasa, na mpampiasa orinasa na mpampiasa an-trano izy, dia mpifaninana amin'ny stopsafeschools.com. stopsafeschools.com manala sy tsy mamela anao hampiasa na hiditra amin'ny tranokalanay, raha maka ireo antontan-taratasy na fampahalalana ao amin'ny tranokalany na hahazoana antontan-taratasy na fampahalalana toy izany amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo. Raha mandika io teny io ianao dia stopsafeschools.com hitantana anao tanteraka amin'ny fatiantoka rehetra izay mety tohizanay sy hanohizanay ho tompon'andraikitra anao amin'ny tombom-barotra mety azonao amin'ny fampiasana tsy ekena sy tsy mendrika. stopsafeschools.com manan-jo hanilika sy handà ny olona miditra amin'ny tranokalanay, ny serivisy na ny fampahalalana misy antsika araka ny fahitantsika azy.
COPYRIGHT, TRADEMARK ARY FIKAROHANA NY Fampiasana
Ity tranonkala ity dia misy ny fitaovana izay fanananay na manana alalana aminay. Ity fitaovana ity dia tafiditra ao, fa tsy voafetra ihany, ny famolavolana, ny laminasa, ny fijerena, ny endrika, ny mari-pamantarana sy ny sary. Tsy mahazo manao mamoaka ireo antontan-taratasy, fampahalalana na fitaovana amin'ny tranokala ianao ho an'ny tanjona amidy na amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo. Indrindra, tsy mahazo alàlana hamerina, handefa, hamindra elektronika na raha tsy izany ianao na mizara ireo fitaovana, tahirin-kevitra na vokatra mety alaina ara-potoana ao amin'ity tranokala ity.
stopsafeschools.com Miaro am-pitiavana ny zon'ny mpamorona rehetra sy ny marika amin'ny antontan-taratasy, fampahalalana ary fitaovana rehetra ao amin'ny tranokalanay ary manana zo hihetsika ianao raha mandika ny iray amin'ireo teny ireo.
Na inona na inona famerenana ny fandalinana na fanaterana ny ampahany na ny votoatiny amin'ny endrika rehetra dia voarara ankoatra ireto manaraka ireto: azonao atao ny manao pirinty na misintona amina kapila mafy eo an-toerana ho an'ny fampiasana manokana sy tsy ara-barotra; ary azonao atao ny mandika ny votoatiny amin'ny ankolafy fahatelo ho an'ny fampiasana azy manokana, saingy raha manaiky ny tranokala ho loharanon'ny fitaovana ianao.
Mety tsy azonao atao, afa-tsy amin'ny fanomezan-dàlana nosoratan-keloka an-tsoratra, manaparitaka na manararaotra ny votoaty. Azonao atao koa ny mampita izany na manangona izany amin'ny tranonkala hafa na endrika hafa amin'ny rafitry ny fitadiavana elektronika.
NY FAHAFAHANA AZY
Ireo teny sy fepetra ireo dia maneho ny fifanarahana manontolo eo aminao sy stopsafeschools.com momba ny fampiasana sy fidinao amin'ny stopsafeschools.comtranokala sy ny fampiasana anao ary ny fidirana amin'ireo antontan-taratasy sy fampahalalana momba izany. Tsy misy fepetra hafa ampidirina amin'ity fifanarahana ity afa-tsy izay takiana amin'ny fampidirana lalàna rehetra momba ny Commonwealth na any amin'ny Fanjakana na faritany. Ireo voambolana rehetra tsy misy dikany afa-tsy ireo izay ampiharina amin'ny lalàna ary tsy azo esorina amin'ny fomba mazava dia voamarika mazava tsara eto.
FAMPISEHOANA NY ZAVATRA TSY MISY INDRINDRA
Raha misy fehezan-dalàna na fehezanteny etsy ambony dia tsy ara-dalàna, tsy manan-kery, na tsy voatazona ao amin'ny Fanjakana na faritany tsirairay, dia tsy ampiharina io fehintsoratra io ary tsy raisina ho tsy tafiditra ao amin'ireto fepetra sy fepetra ireto ao. io Fanjakana io na faritany. Ny fika toy izany raha toa ka ara-dalàna sy azo ampiharina amin'ny any amin'ny Fanjakana na faritany hafa dia tokony hitohy amin'ny fomba feno sy ampahan'io fifanarahana io any amin'ireo Firenena sy Faritany hafa. Ny fanilihana ny voambolana mifanaraka amin'ity andalana ity dia tsy hisy fiantraikany na manova tanteraka ny fampiharana tanteraka sy ny fananganana fehezan-teny sasany sy ireo fepetra ireo.
Ity fifanarahana ity sy ity tranokala ity dia iharan'ny lalàn'i VICTORIA ary Aostralia. Raha misy ny fifamaliana eo aminao sy stopsafeschools.com izany dia mitarika amin'ny fitsaràna ary tsy maintsy manolotra ny fahefana momba ny fitsarana an'ny VICTORIA.